Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Maaskaro xad -dhaaf ah oo ku jira Dagaalka Cuntada Khatarta ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Waxaa jira in ka badan hal hab oo wax lagu cuno iyadoo maaskaro la daboolay.
Dugsi hoose oo ku yaal gobolka Washington, USA, maamule ayaa u sheegay waalidiinta inay u sheegaan carruurtooda inay qasab tahay inay xirtaan maaskaro marka ay qadada ka cunaan kafateeriyada - dhammaan waqtiga ay wax cunayaan. Si kale haddii loo dhigo, qaado fargeeto, hoos u dhig maaskaradaada, qaniinyada kor u qaad, maaskaro kor u qaad, calali, liq, ku celi.
Siyaasadda degmada dugsiga ee xirashada maaskarada COVID-19 waxay leedahay maaskaro ma aha in la xidho marka wax la cunayo.
Raadiyaha idaacadda Jason Rantz ayaa warkan u soo jiitay dareenka dadweynaha iyada oo loo sii daayay barnaamijkiisii ​​AM -ga ee KTTH ee Seattle.
Waxa uu helay nuqul ka mid ah iimaylka loo soo diray waalidiinta aabbe danaynaya kaas oo sheegay in waqtiga qadada ay tahay waqti khatar ah.
Iimaylka ka yimid maamulaha Dugsiga Hoose ee Geiger Montessori ee Tacoma, Washington, Mr. Neil O'Brien ayaa loo diray waalidiinta si loogu cusboonaysiiyo siyaasadaha dugsiga ee COVID-19. Iimaylka ayaa qayb ahaan lagu yidhi: “Carruurtu waa inay xidhaan waji -xidhka xilliga qadada. Waxay hoos u dhigi karaan si ay u qaniinaan ama u cabbaan, una koriyaan si ay u calaliyaan, u liqaan, ama u hadlaan. ”
Maamulaha ayaa ku sii sharraxay emaylka in kasta oo xaqiiqda ah in kafateeriyadu leedahay “nidaam hawo -socod oo fantastik ah” oo ardaydu ay bulsho ahaan aad u kala fog yihiin, “waxaan u baahannahay inaan ula dhaqanno waqtiga qadada sidii waqti khatar ku ah dadka oo dhan.”
Sida laga soo xigtay shabakadda Dugsiyada Dadweynaha Tacoma, the Covid-19 Siyaasadda ayaa sheegeysa in ardayda, shaqaalaha, iyo booqdayaasha “waa inay xirtaan maaskaro gudaha, marka laga reebo markay wax cunayaan.”
Dugsiyada Dadweynaha Tacoma waxay soo saareen bayaan ay ku sharraxayaan in tafsiirka Maamulaha O'Brien ee tilmaamahoodu uu ka baxsan yahay ujeeddada. Bayaanka ayaa u qornaa sidan.
“Heerka markii hore lagu dejiyay Geiger waxaa lagu aasaasay iimaan wanaagsan sida fasiraadda tilmaamaha waaxda caafimaadka si loo xidho maaskaro marka 'si firfircoon wax loo cunayo.' Markaad iska hubiso waaxda caafimaadka, halbeeggaasi wuu ka baxsan yahay ujeedadooda. Ma ciqaabi doonno arday kasta oo aan xidhnayn waji -xidhka u dhexeeya qaniinyada. ”
Ma aha markii ugu horeysay ee maaskaro aad u daran
Dabayaaqadii Oktoobar 2020, Gavin Newsom, Guddoomiyaha California, ayaa dhajiyay tweet ku saabsan maqaayadaha maqaayadaha. Wuxuu yiri: “Inaad u baxdo inaad wax la cunto xubnaha qoyskaaga dhammaadka toddobaadkan? Ha iloobin inaad maaskaro ku dhex waddo qaniinyada. ”
Xitaa wuxuu ku daray sawir gacmeed gabadh yar oo maaskaro gashatay, iska qaadday si ay wax u cunto, oo mar labaad dib ugu celiso qaniinyo kasta. Tweet -ka barbaro degdeg ah iyagoo jawaabo ku tilmaamaya hadalka Guddoomiyaha mid doqonimo ah.
Waxaa caddeeyay dowladda in marka makhaayadaha wax lagu cuno, dadku ay xirtaan maaskaro laakiin aysan ahayn markay dhab ahaan wax cunayaan oo wax cabbayaan - caddeyn dheeraad ah: kuma dhex jirto qaniinyo kasta.
In Socodka Automation
Dalka Israa’iil, waxaa la soo saaray weji la imanaya kontoroolka fog. Waxay u oggolaanaysaa dadka wax cuna inay cunaan iyagoon iska bixin maaskaro. Maaskarada waxaa lagu furi karaa gacan fog oo farsamo ahaan ama maaskaro ayaa si toos ah u falcelin doonta marka ay dareento maacuun ku dhow furitaanka maaskarada. Baahidu waa hooyada hal -abuurka.